Duputa Mara Mma, N’ezi na-anabata ọdịda na nkeji na LeadPages
Sundaybọchị Sọnde, Ọgọstụ 27, 2017 Thursday, August 31, 2017 Douglas Karr
LeadPages bụ a ọdịda peeji nke ikpo okwu na-enye gị ohere ebipụta ndebiri, na-anabata peeji ibe gaa Facebook, WordPress ma ọ bụ saịtị nke gị na ntanetị ole na ole. Na LeadPages, ị nwere ike mfe ịmepụta ahịa peeji nke, welcome n'ọnụ ụzọ ámá, ọdịda peeji nke, igba egbe peeji, afanyekwa peeji, launching anya peeji nke, na-ekele gị peeji nke, tupu ụgbọ peeji, upsell peeji nke, banyere m peeji nke, Ajụjụ ọnụ usoro peeji nke na ndị ọzọ.
Nwere ike ịmepụta ma malite peeji nke ọdịda site na iji edemede embed iji nọrọ n'ụlọ ha na saịtị gị, ma ọ bụ jiri URL ha. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị nwere saịtị WordPress, ha nwere nnukwu ngwa mgbakwunye ebe ị na-ahọta peeji ọdịda gị na ndepụta nke ibe ndị ị bipụtara. Gbasaa ule dịkwa ndị ahịa LeadPages niile dị ugbu a.
LeadPages ọdịda Page Atụmatụ
Ego ndi emere - Mee ahịa ma nyefee ngwaahịa dijitalụ site na ibe ọdịda ọ bụla ma ọ bụ popup na Checkouts. Niile ị chọrọ bụ Leadpages, a free Stripe akaụntụ, na ihe na-ere.
Temkpụrụ omume na-eji agagharị agagharị - Bido rụpụta peeji gị jiri iri atọ na atọ + na - akwụghị ụgwọ, ndebiri na - eme ọfụma — ha niile na - arụ ọrụ ọmarịcha ama na ama dịka ha na - arụ na desktọọpụ.
Drag-na-dobe Nhazi - Mee ọ bụla peeji nke gị site na idobe ọhụrụ ọcha ebe ị chọrọ ha. Ederede, onyogho, bọtịnụ, na ọbụna wijetị dị ka ngụda ngụda oge niile dabara adaba.
Nyocha A & B dị mfe A / B - Hụ otu akwụkwọ gị na opt-in forms na-eme na ilele, wee bulie site na ịtọlite ​​ule A / B. Ọ na-ewe naanị ole na ole ịmalite ịchọpụta ihe na-arụ ọrụ maka ndị na-ege gị ntị.
Mmekọrịta - Mee sọftụwia ahịa na ire ahịa ị na-eji ugbua ike karịa site na ijikọ ya na Leadpages. Ziga kọntaktị ọhụrụ na listi email gị, CRM, webinar platform, ma ọ bụ niile dị n'elu.
Ebute Capture Pop-Ups - Anakọta na-eduga ebe ọ bụla na saịtị ọ bụla na Leadboxes abụọ-nzọụkwụ opt-na ụdị. Na akpaghị aka tinye ọhụụ na ndepụta email ọ bụla ma hapụ ka usoro nnyefe magnet anyị wuru n'ime ha kacha ọdịnaya gị.
Koodu Nwepu SMS & Njikọ ntinye ntinye 1 - Weghara opt-ins ebe ọ bụla na-eduga na-ebu ekwentị ha na Leaddigits-ihe niile ọ na - ewe bụ mkparịta ụka ederede SMS akpaghị aka. Wee, ka ndu debanye aha aha email ọhụrụ ma denye aha maka webinars ozugbo na igbe mbata ha na Leadlinks.
LeadPages ugbu a jikọtara ya na ụgbọ ibu azụmahịa, ahịa email na nyiwe akpaaka akpaaka tinyere 1ShoppingCart, InfusionSoft, Mailchimp, Office Autopilot, GetResponse, Kpọtụrụ Kọntaktị, AWeber, GoToWebinar, 1AutomationWiz, iContact, SendReach na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ọnụahịa dị ọnụ ala ma na-agụnye peeji ọdịda ọdịda na-akparaghị ókè, ịnweta ndebiri niile, ntinye aka, ntinye WordPress, ịnweta mmemme mmemme ha, yana iwepụ nkwekọrịta kwa afọ site na ndenye aha ọnwa.
Banye maka LeadPages Ugbu a!
Ngosipụta: Obi dị anyị ezigbo ụtọ, anyị debanyere aha ma dee akwụkwọ a na njikọ njikọ anyị!
Tags: 1 akpaakaWiz1zụ ahịaAWeberKpọtụrụ na mgbe niileGetResponsegotowebinarKpọtụrụMicrosoftọdịda peeji nke ikpo okwundị ndebiri ndebanye alambido peeji nkeLeadPagesmailchimpmobile ọdịda peejiAutopilot nke ụlọ ọrụanabata ọdịda peejiZigapeeji nke ọdịda ibe
Aug 30, 2016 na 8: 41 AM
Nke a dị mma. Ọ dị ka ihe ngwọta usoro ndu ndu siri ike. M na-eche ma ọ ga-iwekota na m ahịa akpaaka n'elu ikpo okwu ezie. M na-eji SendPulse ma ọ bụghị na ndepụta nke njikọta dịnụ. Ijikọta site na API bụ ihe ezi uche dị na ya mana ọ chọghị nke ọma.